စရိုက်လက္ခဏာတွေ ၏ အစ္စလာမ် ယဉ်ကျေးမှု - သုတ် နာမည် နှင့် မွတ်စလင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုခံ့ သုတ် နာရီ - ရှန်ကျန်း jiayi အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စရိုက်လက္ခဏာတွေ ၏ အစ္စလာမ် ယဉ်ကျေးမှု - သုတ် နာမည် နှင့် မွတ်စလင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုခံ့ သုတ် နာရီ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိယဉ်ကျေးမှုအသီးသီးတွင်“ ကလေးအမည်ကိုမည်သို့ခေါ်ဆိုရမည်” ဟူသည့်ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ရှိသည်။ တရုတ်လူမျိုးများသည်“ နာမတော်” ကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်လေ့ရှိကြသည်။ အချို့ကမိမိတို့၏ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြီး၊ အချို့ကဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်၊ အချို့သည်၎င်းတို့၏ဆန္ဒများသို့မဟုတ်မိဘများ၏ဆန္ဒများကိုဖော်ပြကြသည်။ "အမည်" ။ ယနေ့ခေတ်တွင် "my name ... " ဆိုသောကြွေးကြော်သံနှင့်အတူမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများစွာရှိသည်။ ကျောင်းသားများသည်ရေးစပ်သီကုံးရန်တီထွင်သူတီထွင်သူ "တီထွင်မှု" နှင့်အခြားကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များအပြီးအမည်ရှိသော "သိပ္ပံပညာရှင်" ကိုရေးရန်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာနာမည်ကိုလူတွေကသိတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ကလေးများအားအမည်ပေးခြင်းသည်အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်းရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
ရှေးခေတ်အာရေဗျတွင်ခြေသလုံးနှင့်စာမတတ်သော်လည်းအမည်များကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာပြန်လည်ထွန်းကားလာချိန် မှစ၍ အမည်ပေးခြင်းသည်မွတ်စ်လင်မ်တို့၏အဓိကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်လာသည်။
ကိုရမ်က "သူတို့ကိုမင်းတို့အဘ၏အမည်ဖြင့်ခေါ်မည်။ (၃၃: ၅)
သန့်ရှင်းသောဖခင်က“ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ဘုရားသခင်သည်မင်းတို့၏နာမည်နှင့်အဘတို့၏အမည်များကိုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လှပသောနာမည်ရှိရမည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏နာမည်ဆိုးသည်ဆိုပါကသူတို့ပြောင်းလဲသင့်သည်။
Abou houlel: သန့်ရှင်းသောဖခင်က“ မိဘများသည်သားသမီးများအတွက်တာဝန်သုံးခုရှိသည်။
1, ကောင်လေးနှင့် ecstasy ကြောင့်မ, မိန်းကလေးနှင့်ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်လည်းမလုပ်ပါ။ လူတစ်ယောက်သည်ကောင်လေးကောင်းသို့မဟုတ်ကောင်းသည်ကောင်မလေးကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာကလေး၊ ကောင်မလေးမရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဖခင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ ထို့အပြင်မိန်းကလေးများသည် ပို၍ ငြိမ်းချမ်းပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ အိဗ်ဘာ့စ်၏အဖြစ်အပျက်တွင်သန့်ရှင်းသောဖခင်က“ သမီးနှစ်ယောက်ရှိသောသူသည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုပြုလော့။
၂။ ကလေးငယ်မွေးဖွားလာသောအခါသူ၏နားထဲတွင်ကြွေးကြော်ချက်ကိုရွတ်ဆိုပါ။ သင်၏ကလေး၏ပထမ ဦး ဆုံးစကားလုံးများကို“ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် မှလွဲ၍ မရှိ” ဟူ၍ စတင်ပြောဆိုပါ။ သတ္တမနေ့၌သားယောက်ျားအားအရေဖျားလှီးခြင်းကိုပြုရမည်။
၃။ ကလေးအားနာမည်ကောင်းပေးပါ။ ၎င်းသည်ကလေး၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများဖြစ်သည်။ "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အကြိုက်ဆုံးအမည်များမှာအဗ္ဗဒူလာ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကျေးကျွန်) နှင့်အဗ်ဒါမန် (သနားခြင်းကရုဏာအရှိဆုံးအရှင်၏ကျေးကျွန်) ဖြစ်သည်" ဟုဖခင်ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲသင့်သည်မုန်းတီးမှုအမည်များရှိပါတယ်။
၄။ လူတစ်ယောက်ရရင်သိုးနှစ်ကောင်ကိုသတ်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရတဲ့အခါသိုးကိုသတ်ပါ။
5. သင့်ကလေးကိုချိန်းတွေ့ရန်သို့မဟုတ်သကြားလုံးပေးပါ။ "ငါကျူးဘားရှိ abdullah bin zuber ကိုငါမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့ဖို့သွားပြီးကလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ သူကတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချိန်းတွေ့ရန်၊ ဝါး။ ကလေးငယ်၏ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ကလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးသည်နှင့် သခင်ဘုရား၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမေးပါ။ အဗ္ဗဒူလာသည်အစ္စလာမ်ခေတ်တွင်ပထမဆုံးမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်တရုတ်မူဆလင်များသည်ဤထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်ဓလေ့ထုံးစံကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယွမ်မင်းဆက်အဆုံးသတ်နှင့်မင်းဆက်မင်တို့၏အစတွင်ဆူတာ၏အမည်ကို huihui ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်မူဆလင်များမှကလေးများအားပေးသောအာရဗီအမည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်အစ္စလမ်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောတရုတ်နာမည်ပေးရုံသာမကတရုတ်မွတ်စ်လင်မ်များသည်ကလေးအားအာရဗီအမည်ပေးသင့်သည်၊ Huai zu ၏ဇာစ်မြစ်ကိုခြေရာခံသည်၊ ၎င်းကို ၄ င်းတို့၏မူဆလင်ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖော်ပြရန်နှင့်အချို့ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတွင်အသုံးပြုသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်အရကလေးငယ်ကိုမင်္ဂလာရှိသောအမည်တစ်ခုပေးခြင်းသည်အလေးအနက်ထားရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဆတ်တာနာမည်သည် "ဆန်နာတီ" (သန့်ရှင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်း) နှင့်ဆိုင်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ကလေးမွေးပြီးခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်၊ အီမာမ်သို့မဟုတ်လေးစားသောအကြီးအကဲများသည်ကလေး၏သန္တာအမည်ကိုတောင်းရန်တောင်းဆိုသည်။ အချို့ကိုသူမွေးပြီးသုံးရက်အတွင်းအမည်ပေးခဲ့သည်။ ကွဲပြားမှုအချို့မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်အချို့သောအချိန်များရှိသော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်း၏အမည်ကိုရရန်အတွက်အချိန်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ လပြည့်ချိန်ထက်နောက်မကျဘဲတိကျသောအမည်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပရန်လိုသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာမှာ - မိသားစုအားအိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ကြီးပြင်းလာသူ၊ ကလေးငယ်ကိုသူ၏လက်များနှင့်အတူထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်စေသည်။ သုတ်များကို ဦး စီး ဦး ဆောင်သူသည်ကောင်းကင်အခန်းထဲသို့မျက်နှာမူ။ ကလေးကိုဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ထားသင့်သည်။ ထို့နောက် nebank ဟုပြောပြီးသင်၏ဘယ်ဘက်နားသို့ထိုးပါ။ အဆိုပါ "မှုတ်" အလွန်လေးနက်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်အစ္စလာမ်သာသနာကိုသယ်ဆောင်လာပြီး“ အီမာန်နီ” ၏အလင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်နှင့်၎င်း၏အလင်းမှတစ်ဆင့်အစ္စလာမ်၏တောက်ပသောလမ်းမှန်ကိုလျှောက်လှမ်းရန်မျှော်လင့်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအစ္စလာမ်သည်သူ၏ဘ ၀ ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ကိုကလေးငယ်အားသတိရှိရှိမှတ်မိစေရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် "ဘဏ်"? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဘဏ်" ဆုတောင်းပဌနာဖို့ခေါ်ဆိုခကြောင့်ဖြစ်၏ Nebbank ကလူတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ခေါ်နေတယ်။ ကလေးသည်မူဆလင်မိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သော်လည်းအနာဂတ်၌သူသည်တကယ့်မွတ်စ်လင်မ်တစ် ဦး ဖြစ်လာမည်ကိုအာမမခံနိုင်ပါ။ Bank သည်သင်္ကေတအားဖြင့်သူ့ကိုအစ္စလာမ်တံခါးအပြင်ဘက်မှအစ္စလာမ်ဂိတ်တံခါးအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မြင့်မြတ်သောဘုရားကျောင်းတော်သို့ ဦး ဆောင်ခေါ်ဆောင်သည်။ Abou lafia က "fatumai ဟာစန်ကိုမွေးဖွားတဲ့အခါသန့်ရှင်းသောဖခင်ကသူ့နားတွေကိုသူပြောတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်" လို့ပြောခဲ့တယ်။ ပရောဖက်တစ် ဦး က“ ကလေးရှိသောသူသည် 'နား” နှင့်လက်ဝဲဘက်ရှိအတ္တဂါမာ (အတွင်းပိုင်းဘဏ်) ၏နားရွက်ကို ပြော၍ ကလေး၏အမေသည်စကားပြောလိမ့်မည်။ သူ့ကိုကာကွယ်လော့ဟုဆိုလေ၏။
ဆစ်တာ၏ကြေငြာချက်များကကလေးမွေးပြီးသည့်နောက်တွင်သူ့ကိုအစ္စလာမ်အလံအရခေါ်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောမွတ်စလင်မ်ဖြစ်လာစေရန်မျှော်လင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤဓလေ့ထုံးစံသည် ၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးများသည်ကလေးအခမ်းအနားမှဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောနေရာမှကလေးအချို့သည်ကလေးအခမ်းအနားမှခမ်းနားကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကောင်လေးသည်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်၊ ဘာသာရေးသင်ခန်းစာကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ သူ၏ဘာသာရေးဘ ၀ ကိုစတင်ရန်၊ များသောအားဖြင့်ပွဲကျင်းပရန်ပွဲသို့ပင်တင်လေ့ရှိသည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး မွေးဖွားလာသောအခါအခမ်းအနားသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းမိသားစုတွင်လည်းဂုဏ်ပြုကြသည်။
"ဘဏ်" ဟုပြောပြီးသောအခါတက်ရောက်သူအားလုံးသည်ဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ ဆုတောင်းပဌနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -“ အိုဘုရား၊ ဤမွတ်စ်လင်မ်လေးကိုအသက်ရှည်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကောင်းသောအကျင့်၊ ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောမွတ်စ်လင်မ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ သူ့မိသားစုနှင့်သူ့တပည့်များ " ထိုအခါငါကအဘို့ကောင်းသောနာမည်တစ်ခုရွေးရန် imam မေးတယ်။
တာဂျီဟက်ဂျီ၏ရိုးရာဓလေ့အခန်းက“ မြင့်မြတ်သောနာမည်သုံးမျိုးရှိသည်။ အဗ္ဗဒူလာ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကျေးကျွန်)၊ အာဘဒိုရာဟီမီ (သခင်ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အလယ်၌ပရောဖက်များ၏အမည်များရှိသည်။ ဥပမာမိုဟာမက်၊ အာမက်၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အခြားသည်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်ကောင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော Harris, Huma စသည်တို့ဖြစ်သည်။ " အစ္စလာမ်သို့ကူးပြောင်းလာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများမှလည်းသူတို့ကိုနာမည်ပေးခိုင်းရန်အီမာမ်အားတောင်းဆိုရမည်။ ထို့ကြောင့်မွတ်စလင်မိသားစုများသည်ကလေးအားမွေးဖွားပြီးသောအခါအာဗြဟံအားအာရဗ္ဗျုသဖြစ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ များသောအားဖြင့်ပရောဖက် (သူတော်စင်) ၏အမည်နှင့်ပညာရှိများမှခေါ်ယူခြင်းသည်အကျိုးရှိရှိထိမိစေရန်နှင့်ကလေးငယ်ကျန်းမာစွာကြီးထွားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရန်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအထီးအမည်များမှာမိုဟာမက်၊ ibrahim၊ yusuf, ali, hassan နှင့်အမျိုးသမီးအမည်များမှာ ayesha, Fatima စသဖြင့်။ ထို့အပြင်အာရဗီဘာသာတွင်မြင့်မြတ်။ လှပသောအရာများ၏သင်္ကေတအမည်များဖြစ်သော heliruddin (ဥပမာဘာသာရေးလခြမ်း)၊ nurdin (ဆိုလိုသည်မှာဘာသာရေးအလင်း)၊ sherif (noble) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအမည်များတွင် salima (ဆိုလိုသည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှု) ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဟui၊ dongxiang၊ စာရာနှင့် baoan ဒေသများတွင်သူတို့၏ဂန္ထဝင်အမည်များကိုအောက်ပါပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ဥပမာ muhammad, muhammad, abdu ။ abdu; zhang ali, ma ali ကဲ့သို့ခွဲခြားရန်တရုတ်အမည်သစ်နှင့်အတူတူပင်အချို့ အချို့ကမူ zi၊ er sa zi စသည့်ချစ်ခင်စုံမက်မှုကိုပြသရန်“ zi” စကားကိုထည့်သည်။
ရှရီယာဥပဒေအရမွတ်စ်လင်မ်များသည်မိုဟာမက်ဟူသောအမည်နှင့် (ဘုရားသခင့်စေတမန်) ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကလေး၏အမည်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။ အီမာမ်က“ မင်းရဲ့နာမည်ကိုကလေးနာမည်အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့နာမည်မဟုတ်ဘူး” ဟုပြောခဲ့သည် ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို aib elsa လို့မခေါ်နိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဖခင်က“ sa လစာ၌အဘမရှိ။ ထို့ကြောင့်ရှရီယာတွင်နာမတော်ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ ဥပဒေအရမမွေးသေးသောကလေးကိုနာမည်ပေးသင့်သည်။ ကလေးရဲ့လိင်ကိုမသိဘဲနာမည်ဘယ်လိုရလဲ။ omar bin abdul-aziz သတင်းများအရ abdu Rahman က“ မင်းမှာ hamzai, amer, telehan, ouzaibai စတဲ့ကြားနေနာမည်ရှိသင့်တယ်။
ရာသီလာခြင်းခေါင်းစဉ်ကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည် - ပါဝင်သူအားလုံးသည်သန့်ရှင်းသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်သင့်သည် (အထူးအခြေအနေ မှလွဲ၍); မိဘများသည်ကောင်းမွန်သောကလေးများ၏အမည်များကိုသတိရသင့်သည်။ အကယ်၍ မေ့သွားလျှင်၊ မိဘများသည်တာ ၀ န်ပျက်ကွက်မှုကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရမည်။ မိဘများသည် ၄ ​​င်းတို့ကလေးများ၏အမည်များ၏သမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကိုသိရှိနားလည်ရန်နှင့်နားလည်ရန်သင်ယူကြသည်။ သို့မှသာသူတို့ကြီးပြင်းလာသောအခါ၎င်းတို့၏ကလေးများကိုပြန်လည်ပညာပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရှရီယာအဆိုအရမိဘများသည်သူမပြောသောပထမဆုံး နေ့မှစ၍ ဂါထာကိုရွတ်ဆိုရန်ကလေးကိုသင်ပေးသင့်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါသင်ကြားရေးဥပဒေတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို "jia yi's behavior" အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ပထမတစ်ချက်မှာရိုးရာမွတ်စလင်ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာ၌အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှု၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဥာဏ်ပညာကိုဖော်ပြသည်။ လူတိုင်းသိကြသည့်အတိုင်းတရုတ်သမိုင်းတွင်“ မင်းမူ၏မိခင်သည်သူ၏အိမ်နီးချင်းကိုရွေးချယ်ရန်သုံးကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်” ဟူသောဇာတ်ကြောင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ချီးမွမ်းမှုကိုခံယူခဲ့သည်။ နယပုံပြင်တွင် "zhu အနီးတွင်သင်နီလိမ့်မည်၊ မှင်အနီးတွင်အနက်ရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟုလည်းနာမည်ကြီးသည်။ ၎င်းအားလုံးသည်လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကလေးများကိုပညာရှင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးဆုံးသူငယ်ချင်းများအစားကလေးငယ်များအားမိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်စေရန်ဖြစ်စေ၊ ကလေးများအတွက်ပြင်ပအခြေအနေများဖန်တီးရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကစားရန်စရိုက်နှင့်စရိုက်ကိုသိမ်မွေ့စွာလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်။ အထင်ရှားဆုံးအဓိပ္ပာယ်မှာကလေးများသည်“ ဓမ္မ” သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်အစ္စလာမ်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာကုရ်အာန်မှာရှိတဲ့ပရောဖက် (သူတော်စင်) ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေ (သို့) ကျော်ကြားတဲ့အစ္စလာမ်ပညာရှင်တွေရဲ့ကလေးငယ်များ၏ဘ ၀ တိုးတက်မှုကိုလမ်းညွှန်ဖို့လိုက်နာလိမ့်မယ်။ သဘာဝအားဖြင့်၊ ပရောဖက်အားနာမတော်ဖြင့်ရေးသားထားသည်မှာသူတို့သည်လူ့ကျင့်စဉ်၏အမြင့်မြတ်ဆုံးကိုယ်ကျင့်တရား၊ အခိုင်အမာယုံကြည်မှု၊ လူ့ပုံစံ၏လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကြီးမားဆုံးသောပံ့ပိုးမှု၏သမိုင်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏အမည်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းသည်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးသည်ပရောဖက်နှင့်ပညာရှိများကဲ့သို့သီလနှင့်ထူးချွန်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟူသောဆုတောင်းခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ကလေးတစ် ဦး သည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်အရွယ်ရောက်လာသောအခါ၎င်းသည်ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခု၏စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနာမတော်သည်ဓမ္မဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုယ်သူပြောသောအခါ၎င်းသည်လူအားသဘာဝကံကြမ္မာ၏ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကလေးငယ်များနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူ၏ (ဥပမာ) ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးသူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာဆရာဖြစ်လာသည်။
အစ္စလာမ်၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူဆလင်များသည်သူတို့၏ကလေးများကို“ ပရောဖက်များနှင့်ပညာရှိများ” ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဟဲဗာက“ သာမန်ကလေးများပင်မှန်မှန်ကန်ကန်သင်ကြားနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသာမန်လူများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကလေးများအားစီးပွားရေးအမည်များပေးသောမူဆလင်ပုံစံ” သည်အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှု၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။
စင်တာ၏အမည်သည်စင်စစ်အားဖြင့်ခေတ်သစ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပညာရေး၏နိယာမနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှုသည်ရှေးမွေးဖွားသည့်အာရပ်အကျင့်ဆိုးများကိုကလေးမွေးဖွားလာသောအခါကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပညာရေးကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မိဘများသည်ကလေးများကိုငယ်စဉ်ကတည်းကပညာပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ကလေးများကို Sutra အမည်ပေးခြင်းသည်မိဘများ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကလေးများအတွက်ဆန္ဒများကိုဖော်ပြခြင်း၊ ကလေးများအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်း၊ လှပသောအရာများကိုတောင့်တခြင်းအပြင်ကြီးမြတ်သောဘုရားအားသူတို့၏ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းနှင့်နာခံခြင်းတို့ကိုဖော်ပြသည်။